Indlu yoyilo kwindawo ekhethekileyo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguChristian
Indawo yam yokuhlala ikufutshane neepaki zendalo kunye neVulcania. Ubugcisa beRomanesque kunye nenkcubeko ye-gastronomic imelwe ngamandla apho. Yonke imisebenzi yangaphandle inokuqhutywa apho ehlotyeni njengasebusika.Uya kuyithakazelela indawo endihlala kuyo ngomthamo wayo, amagumbi ayo amakhulu kunye nokuhonjiswa kwayo kokuqala. Indawo ekuyo kunye nembono yeCawe yaseSaint-Hérent yohlukile, njengeNtlambo yabaNgcwele kunye neetshimini zayo. Ikhitshi elikhulu nelinezixhobo linokuhlalisa abantu abalishumi elinesibini etafileni.
Ivuleleke ngokubanzi kwintlambo, ibheyi ejonge ngasezantsi ifudumeza indlu kwaye inikezela ngepanorama entle ukusuka kwigumbi lokuhlala okanye kwi-mezzanine ephezulu.
Ikhitshi lihlala lipholile ehlotyeni. Igumbi leTV kunye nethala leencwadi lemidlalo liyafumaneka kubantwana. Kwigumbi lokulala elikhulu, iibhedi zabo ezingatshatanga zinomgangatho oqinisekisiweyo wekhabhinethi umoya.
Uya kuzuza kwishawari ekhanyayo enemibala eyahlukeneyo, ethandwa kakhulu ngabantwana
Iingxowa ze-aggregates ziyafumaneka kwisitovu.
Iindawo ezikungqongileyo uya kufumana iimveliso ezigqwesileyo ingakumbi kwibhula ye-ST Germain. Indawo yokutyela gourmet e BOUDES kunye nenye e BROC iikhilomitha ezimbalwa kude, ulwalathiso ISSOIRE. Kakade ke, ukungcamla iwayini BOUDES, Hamba uye ubone kumyezo wezilwanyana ka ARDES Sur COUZE and enjoy uhamba phezu CEZALIER, cross-lizwe iiholide ski kunye nokwehla kwe Super Besse, Mont Doré, okanye ngesikhephe okanye ukuqabela kwi Allier eziphakamileyo, tyelela i engqongileyo enqatyisiweyo iidolophu.
Sihlala sifumaneka ngelaptop kwaye sinokudluliselwa ngexesha lethu leholide. Ukusebenza kwazo zonke izixhobo zombane, unayo ekhitshini emva kwamaphepha amnyama asongiweyo, ibhodi yokutshintsha eneefuse kunye nokunqunyulwa ngokubanzi. Kwimeko yesidingo, imitha yamanzi ifumaneka kumngxuma ojikelezayo phantsi kwefestile yekhitshi. Kwisitofu esidibeneyo, ngaphezu kwayo yonke into, musa ukuyicoca, siyayinyamekela. Musa ukulahla nantoni na ngaphandle kwephepha langasese kwindlu yangasese
Sihlala sifumaneka ngelaptop kwaye sinokudluliselwa ngexesha lethu leholide. Ukusebenza kwazo zonke izixhobo zombane, unayo ekhitshini emva kwamaphepha amnyama asongiweyo, ibhodi y…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Hérent